Bit By Bit - Ubunzima intsebenziswano - 5.5.5 Yiba ngokweenqobo ezisesikweni
Isiluleko ukuba yokuziphatha isebenza lonke uphando ezibhaliweyo kule ncwadi. Ukongeza imiba jikelele ngakumbi yokuziphatha-kuxoxwa kwiiprojekthi intsebenziswano Isahluko 6-ubunzima amaxesha okuphakamisa imiba ethile ethile yokuziphatha, yaye ekubeni intsebenziswano ubunzima intsha kangaka uphando lwentlalo, ezi ngxaki ukuze asenokungacaci ngokupheleleyo ekuqaleni.
Zonke iiprojekthi ngentsebenziswano ubunzima, imiba imbuyekezo kunye namatyala zintsonkothile. Ngokomzekelo, abanye abantu bakugqala ukungaziphathi ukuba amawaka abantu ababesebenza iminyaka phezu Netflix Prize yaye ekugqibeleni afumane imbuyekezo. Relatedly, abanye abantu bakugqala sikweni ahlawule abasebenzi kwiimalike yabasebenzi micro-task izixa ezincinane kakhulu imali. Umba yokugqibela ngetyala mbhali amaphepha. iiprojekthi ezahlukeneyo bathathe iindlela ezahlukeneyo, kodwa ezinye iiprojekthi ukunika ubuqambi amatyala kuwo onke amalungu ubunzima intsebenziswano; Ngokomzekelo, umbhali lokugqibela iphepha Foldit wokuqala "abadlali Foldit" (Cooper et al. 2010) .
iminxeba Vula kwaye isasazwe nokuqokelelwa kwedatha lunokuvusa imibuzo entsonkothileyo malunga imvume kunye yabucala. Umzekelo, Netflix wakhulula amanqaku abathengi bhanyabhanya bonke. Nangona amanqaku movie ukuze abonakale sensitive, baya angatyhila ulwazi malunga ezithandwa zabathengi 'ezopolitiko nangotyekelo ngokwesondo, ulwazi abathengi akazange avume ukwenza uluntu. Netflix wazama de-ukuchonga data ukwenzela ukuba amanqaku okuhlela ayikwazanga inxulunyaniswe nabani na omnye, kodwa kwiiveki nje emva kokuba zikhutshiwe data Netflix oko kancinane de-zingachazwa ukuba zezikabani yi Narayanan and Shmatikov (2008) (funda isahluko 6). Ngaphezu koko, xa ukuqokelelwa kwedatha zisasazwe, abaphandi zazizakuwathatha data abantu ngaphandle kwemvume yabo. Umzekelo, kwi-Malawi Iijenali Projects, iincoko malunga esinobuzaza (AIDS) angeza ngaphandle kwemvume nxaxheba. Akukho nanye kwezi ngxaki yokuziphatha na koyiswa, kodwa kufuneka ingqalelo kwisigaba kuyilo yeprojekthi. Khumbula ukuba, "isihlwele" wakho wenziwa ngabantu.